မိုးကောင်းမြို့ရှိ ဧရာ(မိုးကောင်း) အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံကို အကယ်ဒမီ နေတိုး မှ လာရောက်ဖွင့်? - Yangon Media Group
မိုးကောင်းမြို့ရှိ ဧရာ(မိုးကောင်း) အဆင့်မြင့်ရုပ်ရှင်ရုံကို အကယ်ဒမီ နေတိုး မှ လာရောက်ဖွင့်?
မိုးကောင်း၊ ဧပြီ ၁၈
ကချင်ပြည်နယ်၊ မိုးကောင်းမြို့ ဈေးကုန်းရပ်ကွက်​ရှိ ယခင်က မြရည်နန္ဒာရုပ်ရှင်ရုံကို အဆင့်မြှင့်တင်ပြင်ဆင်ပြီးဖြစ် သဖြင့် ဧရာ(မိုးကောင်း)ရုပ်ရှင်ရုံအဖြစ် အမည်အသစ်ပြောင်းကာ မေလ(၁)ရက်​​နေ့တွင်​ “ကမ္ဘာ​ကျော်​ရွာ” ဇာတ်​ကားနဲ့အတူ ဖွင့်လှစ်ပြသသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံကို ၂၀၁၇ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှစ၍ အဆင့်မြင့်အကြီးစားပြင်ဆင်ခဲ့ပြီး ထိုင်ခုံများကို လှေကားထစ်ပုံစံ တဖြည်းဖြည်းအမြင့် အဲကွန်းအသံပါတ်လည်စံနစ်နှင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရှုသူများ အဆင်ပြေစေရန် အကြီးစားပြင်ဆင်မှုမျိုးကို ပြုလုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ “ရုပ်ရှင်မင်းသား နေတိုးပါဝင်တဲ့ “ကမ္ဘာ​ကျော်​ရွာ” ဇာတ်ကားပြပြီး နေတိုးကိုယ်တိုင် ရုပ်ရှင်ရုံဖွင့်ပွဲလာလုပ်ပေးမှာပါ၊ အရင်ကတန်းစီစံနစ်နဲ့ပြရတော့ မြို့ကြီးတွေမှာပြပြီးမှ နယ်တွေပြရပါတယ်။ အခုက ရုံပြိုင်စနစ်ဖြစ်လာတော့ ဇာတ်ကားတွေကို တစ်ချိန်တည်းတစ်ပြိုင်ထဲ ပြသပေးနိုင်လာသလို ဇာတ်ကားအဆင့်အတန်းလဲမြင့်လာပါပြီ”ဟု ဧရာ(မိုးကောင်း) ရုပ်ရှင်ရုံမန်နေဂျာ ကိုငြိမ်းချမ်းအောင်မှ ပြောသည်။
ဧရာ(မိုးကောင်း) ရုပ်ရှင်ရုံ၏ လက်မှတ်နှုန်းထားများကို ရှေ့ဆုံးတန်း ကျပ်(၁၀၀၀)၊ ကျပ်(၁၅၀၀)တန်းနှစ်တန်း၊ ကျပ်(၂၀၀၀)တန်း သုံးတန်း၊ ကျပ်(၂၅၀၀)တန်း ရှစ်တန်းနှင့် နှစ်ယောက်တွဲခုံကို ကျပ်(၆၀၀၀)သတ်မှတ်၍ ထည့်သွင်းပြင်ဆင်ထားပြီး အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံအတွင်းတွင် ရိုးရိုးခုံ(၂၄၅)ခုံနှင့် နှစ်ယောက်တွဲခုံ(၁၈)ခုံပါဝင်ကာ ဇာတ်ကားတစ်ကားကို အနည်းဆုံး(၅)ရက် ပြသမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီးတွင် သင်္ကြန်အကြိုကာလ စက်သံဆူညံ အိတ်ဇောများအား ဖမ်းဆီး သိမ်းဆည်းထားသော ??
မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် နားမွန်းကျေးရွာတွင် ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆံ့ ရေလှောင်ကန် တည်ဆောက်ပြီးဖြစ်၍သောက်သ??
မန်းအိမ်ခြံမြေဈေးကွက် အတွင်း တန်ဖိုး သင့်တင့်နေရာများ အရောင်းအဝယ် ပိုဖြစ်နေ စီမံကိန်း ဝန??
BTS အဖွဲ့၏ စီမံခန့်ခွဲရေး ကုမ္ပဏီ နှစ်ပတ်လည် အကျိုးအမြတ်အစွန်း များစွာရရှိ
သန့်ရှင်းသော အစိုးရတစ်ရပ် ပေါ်ထွန်းရေး